आँखामा अन्नो आएर सताउँछ ? यसरी गर्नुहोस् उपचार नत्र आँखामा संक्रमण हहुने खतरा! – Krazy NepaL
April 9, 2021 490
आनो अर्थात् स्टाई आँखामा ब्याक्टेरियाको कारणले हुने संक्रमण हो । परेलामा रहेको तेल ग्रन्थीमा संक्रमण भएर पिप जम्नु आनो निस्कनु हो । सामान्यतया, परेलाको बाहिरी र भित्री भागमा आनो निस्कने गर्छ । बाहिरी भागमा आउने आनो परेलामा एउटा सानो दानाको आकारमा हुने गर्छ । यो सुन्निएर रातो हुन्छ । भित्री भागमा आनो आएमा बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन, तर परेला सुन्निन्छ । भित्रबाट हेर्दा सानो सेतो पिनप्वाइन्ट जस्तो देखिन्छ । आनो एकपटक हराए पनि पुनः आउने गर्छ ।
आनो जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिमा हुन्छ । यो समय–समयमा आउने गर्छ । कसैमा बारम्बार आइरहन्छ । यद्यपि, आनो आँखाको दृष्टिदोष वा अन्य कुनै खराबी होइन । तर, धेरैपटक आउँदा वा संक्रमण बढ्दै गएको खण्डमा आँखामा समस्या हुन सक्छ ।
हामीले आँखा सधैँ सफा पानी धुनुपर्छ। आखाँ चिलायो भनेर मिच्नु हुँदैन। त्यसरी मिच्दा हातमा भएको वा परेलामा रहेको फोहोरले संक्रमण हुन सक्छ। फोहोर हातले आँखा छुनु हुँदैन। आखाँ संवेदनशील अंग भएकाले मेकअपका सामग्री जथाभावी प्रयोग गर्नु हुँदैन।
कमसल सामानको प्रयोगले आँखामा इन्फेक्सन हुन सक्छ। कन्ट्याक लेन्स प्रयोग गर्नेले लेन्स लगाउँदा र निकाल्दा हात राम्ररी धुनुपर्छ। लेन्सलाई पनि राम्ररी ‘डिसइन्फेक्ट’ गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।
आनो बालबालिकामा बढी देखिन्छ। तर बारम्बार दोहोरिएको खण्डमा आँखा जाचँ गराउनुपर्छ। यसरी आनो बारम्बार आउनु भनेको बालबालिकाको दृष्टिसँग सम्बन्धित समस्या पनि हुन सक्छ।
बुढापाकामा आनोको समस्या देखिए मधुमेहको जाँच गराउनुपर्छ । दृष्टिमा समस्या भए समयमै परीक्षण गरेर चस्मा लगाउनुपर्छ। धुलो, धुवाँ र फोहोरबाट आखाँलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ।
समयमै उपचार गरिएन भने आनो फुटेर संक्रमण भई थप दृष्टि सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुने भएकाले चिकित्सकको परामर्श लिनु नबिर्सिनु होला।डा आनन्दकुमार शर्माले तयार पार्नुभएको सामाग्री
Prevपुरुषका लागि गर्भ निरोधक खोप एक पटक लगाएपछि १३ वर्षसम्म प्रभावकारी
आज ३१ आषाढ २०७८ बिहिवारको राशि’फल अति राम्रो छ हेर्नुहोस्
आज २८ जेठ २०७८ शुक्रवारको राशिफल हेर्नुहोस् निकै राम्रो छ